ရိုမေးနီးယားနှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
အကောင်းဆုံး ရိုမေးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့်ရှေ့နေများ ရိုမေးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency နှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားရိုမေးနီးယားရှိ Residency အစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
ရိုမေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များ၏နေထိုင်မှုသည်ရိုမေးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ရိုမေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်ခြင်း၊ ရိုမေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်မှနေထိုင်ခြင်း၊ ရိုမေးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနေထိုင်မှု၊ ရိုမေးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှုနှစ်ခု၊ , ရိုမေးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ ရိုမေးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနေထိုင်ခြင်း၊ ရိုမေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ရိုမေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်မှု၊ ရိုမေးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ရိုမေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနိုင်ငံသား၊ ရိုမေးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ရိုမေးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ရိုမေးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ရိုမေးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ ရိုမေးနီးယားရှိစီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်၊ ရိုမေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်, ဒုတိယ passp ရိုမေးနီးယားရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ရိုမေးနီးယားတွင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒုတိယနှင့်ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ရိုမေးနီးယားရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ ရိုမေးနီးယားရှိရွှေဗီဇာ၊ ရိုမေးနီးယားရှိရွှေဗီဇာ၊ ရိုမေးနီးယားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ ရိုမေးနီးယားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ရိုမေးနီးယားတွင်ဒုတိယရွှေဗီဇာ၊ ရိုမေးနီးယားတွင်ဒုတိယရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ရိုမေးနီးယားတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ရိုမေးနီးယားရှိရွှေဗီဇာ၊ ရိုမေးနီးယားရှိရွှေဗီဇာနိုင်ငံသား၊ ရိုမေးနီးယားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ရိုမေးနီးယားရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်ရိုမေးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရိုမေးနီးယားတွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - EUR 50,000
ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံသည်ဥရောပ၏အရှေ့တောင်အာရှတွင်အကြီးဆုံးသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ လှပသောသစ်တောများ၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတောင်တန်းများ၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းသောရေလမ်းများနှင့်စမ်းချောင်းများနှင့်ထင်ရှားသော Dracula တို့၏နေရာဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းနှစ်များတွင်ရိုမေးနီးယားသည်အနည်းငယ်သာခရီးသည်များနှင့်ယခင်ဘုံဘိုင်များအတွက်အနည်းငယ်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုနက်နဲသောအရာသည်အဆုံးတွင်တည်ရှိပြီးအမှိုက်ပုံဟောင်းများ၏အမှိုက်ပုံများသည်ဥရောပတစ်လွှားသို့ပြောင်းရွှေ့လာပြီးထို ၀ မ်းသာစရာကောင်းသည်။ အရှေ့ဥရောပလူမျိုး။ ဥရောပသားများ၏ ၂၃.၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ရိုမေးနီးယားလူမျိုး ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပြည်နယ်နယ်မြေများတွင်နေထိုင်ခြင်းအပါအ ၀ င်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေအဖြစ်ရှုမြင်ခံခဲ့ရသည်။ ဤနှုန်းသည်ကလေးသူငယ်များကို ၄၂.၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ အထူးသဖြင့်တစ်ကိုယ်ရေအုပ်ထိန်းသူ ၅၈.၂ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ထောက်ပံ့သောအရွယ်ရောက်သူများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်လူ ဦး ရေ၏ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းအောက်တွင်ထိရောက်စွာနေထိုင်ကြသည်။
ပစ္စည်းများ၊ ပစ္စည်းပစ္စည်များ၊ ညစ်ညမ်းခြင်း၊ ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ခြင်းစသည့်ဂေဟစနစ်မတည်ငြိမ်သောလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်နေအိမ်များပူနွေးစေခြင်းစသည့်စိန်ခေါ်မှုများအပါအ ၀ င်အရာများကိုဥရောပကော်မရှင်ကရိုမေးနီးယားတွင်ခန့်မှန်းထားသည်။ ရိုမေးနီးယားလူ ဦး ရေ၏ထက်ဝက်ကျော်သည်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အခန်းတစ်ခန်းစီရှိသောသီးခြားအိမ်များ၌နေထိုင်ကြပြီး ၉၆ ရာခိုင်နှုန်းသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ရိုမေးနီးယားလူမျိုး ၁၃.၈ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဤအိမ်များကိုမနွေးနိုင်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြပြီးလူ ဦး ရေ၏ ၂၀% သည်ပိုးမွှားများတိုးတက်လာခြင်းမရှိဘဲနေထိုင်ကြသည်။
ဘဏ္percentာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ ၄ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်မှုသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ရိုမေးနီးယားပြည်သူလူထုကြားတွင်အသုံးချခြင်းသည်စီးပွားရေးကိုအထောက်အကူပြုသည်။ အခွန်နည်းပါးလာသောကြောင့်အမြန်နှုန်းများမြင့်တက်လာသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဥရောပနှင့်ဥရောပကုန်သွယ်ရေးတွင်ကုန်သွယ်မှုနှင့်ကုန်သွယ်မှုနှင့်ကုန်သွယ်မှုနှင့်ကုန်သွယ်မှုနှင့်ကုန်သွယ်ရေးတိုးမြှင့်လာသည်။ ငွေကြေးဆိုင်ရာလုံခြုံမှု။
၂ ဝ ၁၆ ခုနှစ်တွင်ပုံမှန်မိသားစုတစ်စုဝင်ငွေသည်ဒေါ်လာ ၃၃၀၀ ခန့်ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၁ တွင်ဒေါ်လာ ၇၀၀ ရှိရာမှအလွန်များပြားလာသည်။ မိသားစုအသုံးစရိတ်သည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၁,၉၀၀ မှ ၁၀ နှစ်အတွင်းတစ် ဦး ချင်းဒေါ်လာ ၂၈၀၀ အထိတိုးများလာခဲ့သည်။ ဤတိုးမြှင့်မှုများသည်ရိုမေးနီးယား၏ဘဏ္developmentာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အီးယူသို့ထိရောက်သောနှုန်းထားများနှင့် ၀ င်ငွေနည်းပါးသောအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအပေါ် ၀ င်ငွေခွန်စုစုပေါင်းထုတ်ပယ်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာဖွယ်ရှိသည်။ ရိုမေးနီးယားလူ ဦး ရေ၏။
အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ၇.၂ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ၃.၇ ရာခိုင်နှုန်းသို့ကျဆင်းသွားသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ လူငယ်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းသည် ၁၆.၈ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်သိသိသာသာမြင့်တက်နေပြီးအလုပ်ရှာဖွေမှုနှင့်လူနေမှုအခွင့်အလမ်းပိုမိုများပြားသောလူငယ်များကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းများကိုတိုးပွားလာစေနိုင်သည်။ သို့သော်သတိပြုရမည်မှာအလုပ်သည်လူတို့အားဘေးအန္တရာယ်နှင့်ကြုံတွေ့ရမည်ကိုမတားဆီးနိုင်ပါ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားများ၏ ၂၀% ကျော်နှင့်အမျိုးသမီး ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုအန္တရာယ်ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။
ရိုမေးနီးယားလူမျိုးများသည်ဥရောပ၌လေးနက်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရသောစတုတ္ထမြောက်အထင်ရှားဆုံးသောအရှိန်အဟုန်ကိုခံစားကြရသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ရိုမေးနီးယားလူမျိုး၏ ၂၃.၈ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ၇.၅ ရာနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဥရောပသမဂ္ဂမှချမှတ်ထားသောအခြေခံပစ္စည်းကိုးခုအနက်လေးခုအနက်လေးခုကိုစီမံနိုင်စွမ်းမရှိပါ။ နှစ်စဉ်လေ့လာရေးခရီး၊ လုံလောက်သောပူနွေးလာမှု၊ မော်တော်ယာဉ်၊ အဝတ်လျှော်စက်၊ တီဗီ၊ တယ်လီဖုန်းမှေးမှိန်ခြင်းနှင့်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် tab များကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
နိုင်ငံအတွင်းရှိရိုမာလူမျိုး ၂.၄ သန်းကဲ့သို့သောစုရုံးမှုများသည်လူမျိုးစုလွှမ်းမိုးမှုထက်လိုအပ်ချက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ သူတို့သည်အမှန်တကယ်နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခံရပြီးတည်မြဲသောဘက်လိုက်မှုများကိုဆက်ရှိနေသည်။ ရိုးမားလူမျိုး ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုမစီမံနိုင်ပြီးလိုအပ်သည့်ကူးစက်ရောဂါများကိုတိုးချဲ့တင်ဆက်ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများကိုမခံစားနိုင်ပါ။ ရိုမာလူမျိုးများအတွက်အလုပ်မှာယောက်ျားများအတွက် ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အမျိုးသမီး ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းသည်အမျိုးသမီးများအတွက် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသာဖြစ်သည်။ ရိုမေးနီးယားလူ ဦး ရေ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ ရိုးမားလူမျိုးများသည်အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်များကိုငြင်းပယ်ခြင်းအပေါ်မှီခိုနေရသည်၊ ၎င်းတို့အားဖယ်ရှားခြင်းအားကန့်သတ်ထားသည်။
ရိုမေးနီးယားလူမျိုး၏ ၇.၂ ရာခိုင်နှုန်းကသာလျှင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောသို့မဟုတ်အလွန်ဆိုးရွားသည့်သာယာဝပြောမှုရှိခြင်းကိုအခြားဥရောပနိုင်ငံသား ၈.၈ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပြခဲ့သည်။ UNAIDS မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ရိုဟင်ဂျာ ၁၆၀၀၀ ခန့်သည်အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ / အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါနှင့်အတူနေထိုင်နေကြောင်းအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ယေဘူယျလူ ဦး ရေသည် ၇၅ နှစ်ဝန်းကျင်ရှိသောဥရောပသို့ရောက်ရှိပြီး ၇၉ နှစ်၏ဥရောပ၏ပုံမှန်အတိုင်းကမ္ဘာကြီးသို့ ၀ င်ရောက်သောအခါအနာဂတ်ရှိသည်။
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်ယူကေ၊ အီတလီနှင့်ဂျာမနီတို့ကဲ့သို့သောသာယာဝပြောတဲ့ဥရောပနိုင်ငံများသို့ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းသည် ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကတည်းကကြီးမားခဲ့သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ရိုမေးနီးယားလူမျိုး ၃.၉ သန်းသည်မိမိတို့၏ဒေသပြင်ပတွင်နေထိုင်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောလူ ဦး ရေကိုကျဆင်းစေသည်။ လက်ရှိရိုမေးနီးယားစီးပွားရေးတွင်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောအလုပ်သမားများမရှိခြင်းနှင့်နုပျိုသောအထူးကျွမ်းကျင်သူများ၏အရည်အချင်းပြည့်ဝမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
များစွာသောကုသိုလ်ဖြစ်အသင်းအဖွဲ့များသည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကျဆုံးပြီးကတည်းကတိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်နှင့်သူ၏ဆွေမျိုးသားချင်းများပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရေးအတွက်ရိုမေးနီးယားတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်နယ်နိမိတ်သည် ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ မှစ၍ ရိုမေးနီးယားတွင်မိသားစု ၅၈၀၀၀ ကိုအစေခံခဲ့ပြီးဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ပြိုကွဲလုနီးပါးနေရာများတွင်အစားထိုးဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ရေပိုက်ပြင်ခြင်းနှင့်ရေဝင်ခွင့်ပြုခြင်းတို့တွင်ကူညီခဲ့သည်။ ယူနီဆက်သည်ရိုမေးနီးယားလူမျိုးများအားအေအိုင်ဒီအက်စ်နှင့်အတူနေထိုင်ရန်နှင့်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီ / အေအိုင်ဒီအက်စ်သုတေသနကိုအထောက်အကူပြုရန်ရိုမေးနီးယားအစိုးရနှင့်ကွဲပြားသည့်အသင်းအဖွဲ့များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်။ ရိုမေးနီးယား၏လူမှုရေးအစိုးရအထောက်အပံ့မူဘောင်များကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုနှင့်သာယာဝပြောရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးရန်ပြန်လည်ပေးဆပ်ရသောလုပ်ငန်းများအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏လုပ်ငန်းအနည်းငယ်မှာလည်းတိုးတက်နေသည်။ နိုင်ငံကိုဖန်တီးနေသည့်ကြီးမားလှသောလှုပ်ရှားမှုကြောင့် ကျေးဇူးပြု၍ ဤနေရာတွင်ပြောင်းရွှေ့ရန်လှုံ့ဆော်မှုမှာဆက်လက်တိုးတက်နေသည်။
တစ် ဦး ကဖွံ့ဖြိုးဆဲအနေအထားကိုစျေးကွက်
တီထွင်ဖန်တီးမှုရှိသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများ Accenture ကဲ့သို့ရှိနေခြင်းကြောင့်areasရိယာနှင့်ဒေသသုံးစကားများအရထိပုတ်ပါတ်ရန်အတွက်တံခါးဖွင့်ခြင်းသည်တိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။ အတော်လေးတည်ငြိမ်သောအလုပ်အကိုင်စျေးကွက်နှင့်အတူသင်ဟာတိုးချဲ့အနေအထားစျေးကွက်နှင့်စီးပွားရေးနှင့်အတူနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့နေကြသည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်း, မစိုက်နိုင်ရိုမေးနီးယားသို့ပြောင်းရွှေ့နိုင်ပါတယ်။
လူနေမှုဘ ၀ ၏အနည်းဆုံးအားထုတ်မှု
အရာတစ်ခုမှာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ၊ ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံသည်အနည်းဆုံးဥရောပသမဂ္ဂတွင်နေထိုင်မှုအဆင်ပြေစွာနေထိုင်သည်။ ရိုမေးနီးယားသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသောမည်သည့်ဥရောပသားမဆိုအားစိုက်ထုတ်ကုန်များ၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအဆင်ပြေမှုနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ င်ခွင့်အတွက် ၀ မ်းသာဖွယ်ကောင်းသည့်တည်ရှိမှုကိုရှင်သန်နိုင်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။
Buchov၊ Brasov၊ Lași နှင့် Timiooara တို့သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများအတွက်နာမည်ကြီးကန့်ကွက်မှုများဖြစ်လာသည်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနယ်ပယ်မှာအလုပ်တစ်ခုရှာနေတဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလှုပ်ရှားမှုနဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေအတွက် Accenture နဲ့ရိုမေးနီးယားကိုပြောင်းပါ။ Accenture တွင်သင်သည်အမှတ်တံဆိပ်များမောင်းနှင်နေသည့် Universal အစိတ်အပိုင်းများအတွက်အလုပ်မလုပ်တော့ဘဲထိပ်တန်းအထောက်အပံ့နှင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုခြင်းကိုခံယူရမည်။
သင်နေထိုင်ရလွယ်ကူခြင်းနှင့်သင်လိုအပ်သောယဉ်ကျေးမှုများကိုအလွန် ၀ င်ရောက်ခြင်းတို့ကြောင့်ရိုမေးနီးယားတစ်လျှောက်လုံးတွင်ကျေနပ်ပျော်ရွှင်မှုသည်သိသိသာသာလျောက်ပတ်ပြီးခိုင်မာသောစံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံတွင်နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များနှင့်အတူပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသော၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိတ်ကျေနပ်မှုကိုသင်ချဉ်းကပ်ပုံရသည်ဟုခံစားရပါလိမ့်မည်။
ရိုမေးနီးယားသည်နောက်ပိုင်းတွင်ဥရောပရှိဂီတနှင့်လက်မှုအနုပညာပွဲတော်များကိုထိပ်တန်းကန့်ကွက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဂီတ၊ အီလက်ထရောနစ်၊ လွတ်လပ်သော၊ ရော့ခ်နှင့်ပေါ့ပ်စသည့်ဂီတအမျိုးအစားတိုင်းကိုကြည့်ရှု့မည့်ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်၎င်းတို့နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များလည်းရှိသည်။ စိတ်ကူးယဉ်တော၊ စိတ်ကူးယဉ်တောအုပ်များ၊ ချစ်စရာကောင်းသောသဲသောင်ပြင်များ၊ ကြည်နူးဖွယ်မြင်ကွင်းများနှင့်ရေကန်များကမည်သို့ပင်ဖြစ်စေဆုံးဖြတ်ချက်သည်သင့်အတွက်ပင်!
သင်သိသင့်သိထိုက်သောအချက်တစ်ချက်မှာရိုမေးနီးယားသည်ထူးခြားသောသာလွန်ထူးကဲမှုဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည်။ လှပသောကျွန်းသစ်များ၊ အေးမြသောလမ်းများ၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောရေကန်များနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောဒီဇိုင်းများဖြစ်သည်။ သငျသညျသဘာဝနှင့်ပြင်ပကိုမြတ်နိုးသူဖြစ်ကြောင်းအခွင့်အလမ်းတွင်, ထိုအချက်မှာဤသူသည်သင်တို့အဘို့စံပြရွှေ့ပြောင်းလူမျိုးဖြစ်သင့်သည်။
ရိုမေးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်
စီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုများကြာရှည်ဗီဇာ (D / AE)
ရိုမေးနီးယား၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အပြောင်းအလဲနဲ့အချိန်
အဘယ်ကြောင့်ရိုမေးနီးယား၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ဘို့သွားရ
ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်အီးယူသို့ဝင်ရောက်ခဲ့သော်လည်းယူရိုငွေကြေးကိုသုံးစွဲခွင့်မရှိသေးပါ။ Schengen ofရိယာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရန်မကြာသေးမီကမှသာအရည်အချင်းပြည့်မှီခဲ့သည်။ ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံသည်နိုင်ငံပေါင်း ၁၅၃ နိုင်ငံသို့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားသည်။ တစ်နှစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားယူရို ၁၀၀,၀၀၀ အထိဆိုင်းငံ့ထားရန်ယာယီနေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုချက်ကိုတစ်နှစ်ရရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ယူရို ၅၀၀,၀၀၀ ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါကသို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ၅၀ ကိုဖန်တီးမည်ဆိုလျှင်ယာယီခွင့်ပြုချက်ကိုသုံးနှစ်တစ်ကြိမ်သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။ စုံတွဲတစ်တွဲနှင့်အသေးစားကလေးငါးနှစ်ရှိပြီးနောက်သင်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်အတွက်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ နိုင်ငံသားအဖြစ်ကို (၈) နှစ်နေထိုင်ပြီးမှတင်းကြပ်သောအခြေအနေများအောက်တွင်သာခွဲဝေသတ်မှတ်ထားသည်။
Residency ရိုမေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် insite
အချိန်အနည်းဆုံးအလုပ် ၁၀ ခုဖန်တီးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်အနည်းဆုံးယူရို ၁၀၀,၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မျှော်လင့်ရသည်၊ သို့မဟုတ်အချိန်ပြည့်အလုပ် ၁၅ ခုဖန်တီးသောဖက်စပ်တစ်ခုတွင်ယူရို ၁၅၀,၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးခြင်းသည် ဦး စားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်သော်လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းသည်ခက်ခဲနိုင်သည်။ အနည်းဆုံးယူရို ၁၅၀,၀၀၀ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင် ၂၅ ခုဖန်တီးခြင်းနှင့်အတူရန်ပုံငွေအထောက်အထားကိုတောင်းခံထားသော်လည်း၊ အကယ်၍ သင်သည်ယူရို ၂၀၀,၀၀၀ ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါကသို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ၅၀ ကိုဖန်တီးမည်ဆိုလျှင်ထိုသို့မဟုတ်ပါ။ နေထိုင်ရန်အထောက်အထားလိုအပ်သော်လည်းသင့်အနေဖြင့်ပစ္စည်းဝယ်ရန်မတောင်းဆိုပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, အိမ်ခြံမြေသည်အခြားနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတော်လေးစျေးပေါသည်။
စီးပွားရေးစီမံချက်တွင်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏တန်ဖိုးအပြည့်အဝပါ ၀ င်သည်။ သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်စီစဉ်ထားသည့်နေရာနှင့်ဖန်တီးမည့်အလုပ်အကိုင်အရေအတွက်လိုအပ်သည်။ သင့်အနေဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရန်နှင့်သင်၏စီးပွားရေးတိုးတက်မှု၏သုံးနှစ် layout ကိုသင်ပြင်ဆင်ရန် ၁၂ လရှိလိမ့်မည်။ လိုအပ်သည့်ရန်ပုံငွေများကိုရိုမေးနီးယားဘဏ်တွင်အပ်နှံရမည်။
သင်ကုမ္ပဏီတွင်ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ပါကရိုမေးနီးယားတွင်ကျေနပ်လောက်သော ၀ င်ငွေကိုတစ်လလျှင်ယူရို ၇၀၀ သို့မဟုတ်သင်နှင့်တွဲဖက်ပါကတစ်လလျှင်ယူရို ၅၀၀ ရရှိရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုသင်လိုအပ်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်မိသားစုဝင်များကိုသင်ထောက်ပံ့နိုင်ကြောင်းသက်သေပြရန်လည်းလိုအပ်သည်။
ရိုမေးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် ရိုမေးနီးယားများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ ရိုမေးနီးယားဘို့ ဖောက်သည်များနှင့်ရိုမေးနီးယားရှိသူတို့၏မိသားစုများကိုရိုမေးနီးယားနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအထောက်အပံ့၊ ရိုမေးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံမှထောက်ပံ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ရိုမေးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ရိုမေးနီးယားမှ Golden Visa ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သက်သက်သာသာမဟုတ်ပါ၊ ရိုမေးနီးယားမှနိုင်ငံသားဖြစ်မှုသို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ကန့်သတ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုမေးနီးယားမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုကူညီခြင်း၊ ရိုမေးနီးယားသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ ရိုမေးနီးယားရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်ငွေရေးကြေးရေးစီမံကိန်းနှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်ရိုမေးနီးယားအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ ရိုမေးနီးယားအတွက်၊ ရိုမေးနီးယားအတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ၊ ရိုမေးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင်သောနေထိုင်ခွင့်၊
ရိုမေးနီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
ရိုမေးနီးယားရှိနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာ။
ရိုမေးနီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ရိုမေးနီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
ရိုမေးနီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
ရိုမေးနီးယားရှိနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
ရိုမေးနီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ရိုမေးနီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
ရိုမေးနီးယားမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအထိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုမေးနီးယားရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်ရိုမေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအပေါ်ကောင်းမွန်သောအကျိုးအမြတ်ရရှိသင့်သည်ဟူသောရှုထောင့်နှင့်အတူပံ့ပိုးမှုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရိုမေးနီးယားရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်သူအနည်းငယ်နှင့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးသူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုသည်ရိုမေးနီးယားရှိကောင်းသောနေရာများတွင်တည်ရှိပြီးအကောင်းဆုံးအကျိုးအမြတ်ကိုရရှိစေသည်။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ရိုမေးနီးယား Residency
ရိုမေးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေ၏နေထိုင်မှုသည်သင်၏အောင်မြင်သောနေထိုင်မှုအတွက်ရိုမေးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စံသတ်မှတ်ထားသော ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ရိုမေးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပါဝင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်မည်သည့်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ ရိုမေးနီးယားမှရိုမေးနီးယားသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုနားလည်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency ကိုရိုမေးနီးယားနိုင်ငံရှိ Residence Permit ရယူရန်နှင့်ဖောက်သည်များအားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် First Diligence ကိုပြုလုပ်သည်။
ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံအတွက်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ Residency နှင့်အတူရိုမေးနီးယားနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့သို့လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်အတွက် client နှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့် Apostille ရိုမေးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာအားဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။ Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်ရိုမေးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်ရွှေဗီဇာဖြင့်ဖြည့်သည့်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကူညီလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ရိုမေးနီးယားရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားရိုမေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများက Residency ကိုထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရိုမေးနီးယားများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်ရိုမေးနီးယားရှိလက်နက်နှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရိုမေးနီးယားများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ရိုမေးနီးယားတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်ရိုမေးနီးယားသို့ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရိုမေးနီးယားများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် ရိုမေးနီးယားတွင်တရားမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် ရိုမေးနီးယားဘို့ ရိုမေးနီးယားရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရိုမေးနီးယားများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ရိုမေးနီးယားရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကုန်သွယ်ရေး၊ ရိုမေးနီးယားတွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်သောရိုမေးနီးယားအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ရိုမေးနီးယားအတွက်အထောက်အပံ့မရနိုင်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရိုမေးနီးယားဘို့ တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု ရိုမေးနီးယားဘို့ ရိုမေးနီးယားရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ရိုမေးနီးယား ရိုမေးနီးယားရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် ရိုမေးနီးယားအတွက်ရှေ့ရပျ ရိုမေးနီးယားရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမထောက်ပံ့ပါ
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်ရိုမေးနီးယားနှင့်၎င်းတို့၏ KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျမှန်ကန်စေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း၊ လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်ရိုမေးနီးယားရှိအာဏာပိုင်များမှငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် ရိုမေးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့်ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ၏ဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်များကြောင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Residency ၏ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းမှုများကိုပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ရိုမေးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချနိုင်ပြီးရိုမေးနီးယားအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်မှုရရှိနိုင်သည်။
ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုရိုမေးနီးယားသို့ထောက်ပံ့ပေးသည့်ရိုမေးနီးယားသို့ dual Residency အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရယူခဲ့သည်။
သင်၏ Residence သည်ရိုမေးနီးယားအတွက်နှင့်အတည်ပြုပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်ရိုမေးနီးယားအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့အတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency တွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများရှိပြီးရိုမေးနီးယားအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာတ ၀ ှမ်းမှ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောဖောက်သည်များအားကူညီခြင်း။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်၏ Residency သည်ရိုမေးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်ပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံ ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုရိုမေးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းအားတွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့် ၄ င်းတို့၏အသက်အပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုဖြည့်စွက်ပါ။ ရိုမေးနီးယားအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ ရိုမေးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ ရိုမေးနီးယားဘို့
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ရိုမေးနီးယားတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူရိုမေးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုမေးနီးယားအတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေနှင့်၊ သင်တတ်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းများဖြင့်ရိုမေးနီးယားတွင်သင်လိုအပ်နိုင်သည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
ရိုမေးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံခြင်းဖြင့် Residency မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုမေးနီးယားတွင်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်ရိုမေးနီးယားအတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများကပေးသောထီးတစ်ချောင်းအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုရှာရန်မရနိူင်။
ရိုမေးနီးယားအတွက်မိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ရိုမေးနီးယားနှင့်နိုင်ငံတကာမှအကူအညီများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏ Residency ကို ကျော်လွန်၍ ရိုမေးနီးယားကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်ကူညီသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ ရိုမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် or Offshore နှင့် 106 နိုင်ငံများ (ရိုမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
ရိုမေးနီးယားသို့ပြောင်းရွှေ့လာသည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် ရိုမေးနီးယားရှိပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ်အကောင့် နှင့်ရိုမေးနီးယားရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းကိုလည်းကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်များနှင့်လည်းကူညီနိုင်သည်။
Incase သင်အဘို့, ရိုမေးနီးယားအတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် ရိုမေးနီးယားရှိဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် ရိုမေးနီးယားရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် သငျသညျဖို့စီစဉ်ထားလျှင်ရိုမေးနီးယား ရိုမေးနီးယားရှိလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးတစ်ခုစတင်ပါ ရိုမေးနီးယားတွင်လက်ငင်းစတင်ဘို့။
ရိုမေးနီးယားရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ ရိုမေးနီးယားရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ရိုမေးနီးယားတွင်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ရိုမေးနီးယားအတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ ရိုမေးနီးယားများအတွက် virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, ရိုမေးနီးယားအတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
ရိုမေးနီးယားရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
ရိုမေးနီးယားတွင် setup ကိုစီးပွားရေး
ရိုမေးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ပြီးနောက်, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရိုမေးနီးယား.
ရိုမေးနီးယားတွင် Web ဒီဇိုင်း
ရိုမေးနီးယားတွင် Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ရိုမေးနီးယားတွင် Blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
ရိုမေးနီးယားတွင် App Development
ရိုမေးနီးယားတွင် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
Residency by Investment မှရိုမေးနီးယားရှိရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုမေးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဖြေများအားဖြင့်တရား ၀ င်နေထိုင်ခွင့်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ရိုမေးနီးယားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ ရိုမေးနီးယားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ရိုမေးနီးယားတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ ရိုမေးနီးယားတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်။ ရိုမေးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဖောက်သည်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်ရိုမေးနီးယားတွင်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာသက်တမ်းရှိသည်။
ရိုမေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများက Residency မှသင်၏ကိုယ်စားဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးအတွက်ရိုမေးနီးယားအတွက်ရှေ့နေလိုအပ်သည်။ သင်သည်ရိုမေးနီးယားသို့ရောက်နေလျှင်သို့မဟုတ်ရိုမေးနီးယားသို့သွားရောက်ရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ရှေ့နေအားဤတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ရိုမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ပါကရိုမေးနီးယားနယ်မြေတွင်အသုံးပြုရန်သင်၏ရှေ့နေအားတရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံအပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်အက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်ရိုမေးနီးယားကောင်စစ်ဝန်ရုံးကတရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။
အမေးများသောမေးခွန်းများ - ရိုမေးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်း
စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ၏နေထိုင်မှုကိုရူဘီယံသို့ပြောင်းခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ရိုမေးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း၊ ရိုမေးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ခွင့်၊ ရိုမေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ရိုမေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ရိုမေးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ရိုမေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်နဲ့အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများကကူညီခြင်း ရိုမေးနီးယား၌တည်၏။
ရိုမေးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် ရိုမေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခွင့် ရိုမေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်မှု | ရိုမေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် ရိုမေးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများ၏နေထိုင်မှု
ရိုမေးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုရိုမေးနီးယားရှိစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ရိုမေးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ရိုမေးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုရိုမေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ ရိုမေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများမှနိုင်ငံသားနှင့်ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားခြင်း။ အကောင်းဆုံးမှာရိုမေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များနှင့်ရိုမေးနီးယားရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ။
စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုရိုမေးနီးယား | စျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများရိုမေးနီးယား | တတ်နိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရိုမေးနီးယားအတွက် စျေးနှုန်းချိုသာသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံရိုမေးနီးယား | စျေးသက်သာသည့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်တရားဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ၏တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းစသည်တို့ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ရိုမေးနီးယားသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း၊ ရိုမေးနီးယားအတွက်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြံပေးများ၊ ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးဒုတိယပတ်စ်ပို့ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ရိုမေးနီးယားရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတဆင့်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
ရိုမေးနီးယားအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ ရိုမေးနီးယားရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ ရိုမေးနီးယားရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ရိုမေးနီးယားရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ရိုမေးနီးယားအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
ရိုမေးနီးယားရှိရွှေဗီဇာကိုအစိုးရ၏ငွေချေးစာချုပ်၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည့်နည်းလမ်းများဖြင့်ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရယူခြင်းဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ရိုမေးနီးယားသို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း၊ ရိုမေးနီးယားအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ ရိုမေးနီးယားရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်ရိုမေးနီးယားအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအကြံပေးများ၊ ရိုမေးနီးယားရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ရိုမေးနီးယားရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်ရိုမေးနီးယားအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
ရိုမေးနီးယားအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | ရိုမေးနီးယားရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ ရိုမေးနီးယားရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ရိုမေးနီးယားရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ရိုမေးနီးယားအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
ရိုမေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
Residency တွင်ရိုမေးနီးယားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ယူရို ၅၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရိုမေးနီးယားအတွက်တရားဝင်အထောက်အပံ့ပေးပါသလား။
ဟုတ်ပါသည်၊ ရိုမေးနီးယားရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်ရိုမေးနီးယားရှိအေးဂျင့်များသည် Residency ကိုရိုမေးနီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပံ့ပိုးသည်။
ရိုမေးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ရိုမေးနီးယားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်များကြောင့် Residency သည်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency မှရိုမေးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြေးကိုသာပေးဆောင်ရသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုဖြင့် Residency အတွက်အခြားအထောက်အပံ့များကိုလည်းပေးသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သည်မည်သည့်နိုင်ငံသားမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအနည်းငယ်မှာအာရှမှရိုမေးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အာဖရိကမှရိုမေးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဥရောပမှရိုမေးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ တောင်အမေရိကမှရိုမေးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ မလေးရှားမှရိုမေးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှရိုမေးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားမှရိုမေးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ သီရိလင်္ကာမှရိုမေးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ နီပေါမှရိုမေးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အိန္ဒိယမှရိုမေးနီးယားသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ယူအေအီးမှရိုမေးနီးယားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု ရိုမေးနီးယားဘို့
မီးရထားလမ်းသတင်းအချက်အလက် (ဘူခါရက်စ်) - (021) 9521; www.cfrcalatori.ro;
ဒေသဆိုင်ရာဥရောပကော်မတီ - https://www.cor.europa.eu
ဥရောပသမဂ္ဂကောင်စီ - http://www.consilium.europa.eu
ခရီးသွား for ည့်များအတွက်အခမဲ့အခွန် (လေယာဉ်အသွားအလာ) - 0800.86.82.82;
ရိုမေးနီးယားရဲတပ်ဖွဲ့ - www.politiaromana.ro.
ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံရှိ ၀ န်ကြီးဌာန http://www.dprp.gov.ro/
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအထွေထွေစစ်ဆေးရေး (ORI): http://ori.mai.gov.ro/home/index/en
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် Extrication အတွက်မိုဘိုင်းအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှု (SMURD): http://www.smurd.ro/
တစ်ခုတည်းသောအမျိုးသားအရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစနစ် - http://www.112.ro/
တယ်လီဖုန်းသုံးစွဲသူများအပေါ်အချက်အလက် - ၁၁၈.၉၃၂; www.118.932.ro
ဥရောပပါလီမန် - http://www.europarl.europa.eu
ရိုမေးနီးယားရိုမေးနီးယားနိုင်ငံလစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံ (လတ်ဗီးယားတွင်အသိအမှတ်ပြုထား) http://vilnius.mae.ro/en
အမျိုးသားကျန်းမာရေးအာမခံအိမ် - www.cnas.ro.
ရိုမေးနီးယားရှိနိုင်ငံမှကလေးများအတွက်နွေရာသီစခန်း - http://www.dprp.gov.ro/au-inceput-inscrierile-pentru-programul-de-tabere-arc-2017-2/
ဘူခါရက်စ် Otopeni လေဆိပ် - (021) 204.10.00; www.otp-airport.ro;
ရိုမေးနီးယားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံး - http://ori.mai.gov.ro/;
ရိုမေးနီးယားအတွက်ရှေ့ဆက် - +40; နောက်ထပ်အချက်အလက်အတွက်သွားပါ www.tourismguide.ro/x/prefixe;
ရိုမေးနီးယားပါလီမန် - http://www.parlament.ro
ရိုမေးနီးယားရဲတပ်ဖွဲ့နယ်စပ် - http://www.politiadefrontiera.ro/.
လူနာတင်ယာဉ်၊ ရဲ၊ မီးသတ်သမား - ၁၁၂;
ဥရောပစီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးကော်မတီ - http://www.eesc.europa.eu
ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်စနစ် - http://www.snia.ro/
နယ်စပ်ရဲတပ်ဖွဲ့ - (021) 201.33.09; www.politiadefrontiera.ro;
ရိုမေးနီးယားရဲတပ်ဖွဲ့နယ်စပ် - www.politiadefrontiera.ro.
ဘူခါရက်စ် Baneasa လေဆိပ် - (021) 232.00.20; www.baneasa-airport.ro;
link ကိုမှ ရိုမေးနီးယားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန , ရိုမေးနီးယားရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရှိန်မြှင့်များအတွက်မူဝါဒများရေးဆွဲတာဝန်ရှိသည်